eDeshantar News | हामीलाई थकाउँदै लाने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष हिँडेको छ - eDeshantar News हामीलाई थकाउँदै लाने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष हिँडेको छ - eDeshantar News
२०७७ कार्तिक ११
थप ५७० जनामा कोरोना पुष्टि, ३१ सय ६८ निको भए, १४ को मृत्यु
संविधानसभा सदस्य मानपुर चौधरीको कोरोना संक्रमण बाट मृत्यु
वीपी प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमित एक जना पुरुषको मृत्यु
विश्‍वभर चार लाख १० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए
दशैंको टीकाको दोस्रो दिन पनि टीका, जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गरिंदै
तीन दिनको मौसम अनुमान : अधिकांश ठाउँ सफा रहने
कोलकोतामाथि किंग्स इलेभेन पञ्जाबको ८ विकेटको जित
प्रधानमन्त्री दम्पतीले राष्ट्रपतिको हातबाट लगाए टीका
पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४१ जना कोरोनामा कोरोना संक्रमण
अन्तर्वार्ता Breaking News
हामीलाई थकाउँदै लाने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष हिँडेको छ
जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
२०७७ आश्विन १८
यतिबेला पार्टीका केही आन्तरिक गतिविधिहरू पनि छन् । साथै घरायसी सामान्य कामहरूमा व्यस्त छु ।
फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ त ?
आगामी फागुन ७–१० का लागि केन्द्र्रीय महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छ । तर महाधिवेशनको कार्यतालिकामा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । त्यो कार्यतालिकालाई संशोधन गरेर भए पनि महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्छ । हाम्रो त कार्यकाल पनि सकिसकेको छ । अहिले हामी अतिरिक्त कार्यकालमा हिँडिरहेका छौं । कांग्रेसले तय गरेको मितिभन्दा पछाडि जान सक्ने व्यवस्था हामीसँग छैन ।
फागुनमै महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका संशोधन गर्ने कि त्योभन्दा पछाडिका लागि मिति तय गर्ने ?
महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो सर्त भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण हो । यो भएपछि सदस्यतालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ । ती कामहरू गर्नका लागि कार्यतालिकामा केही अप्ठेराहरू आइरहेका छन् । त्यसैले हामीले पटकपटक पार्टी नेतृत्वलाई घचघच्याउने काम गरेका हौं । कार्यतालिकाअनुसार काम पनि हुन पर्‍यो । कार्यतालिका देखाउनका लागि मात्रै हुनु भएन । कार्यतालिका बाहिर पब्लिकमा यति गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, यति समयमा अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने, यति समय छानबिन गर्ने भनेर कार्यतालिका देखाएर मात्र भएन । यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जुन कुराहरू भदौ र असोज मसान्तभित्र सक्नुपर्ने थियो ती कामहरूमा गति प्रदान भएको छैन । त्यसले गर्दा महाधिवेशनमा भएका कतिपय विषयहरू प्रभावित भएको अवस्था हो ।
कोरोनाका कारण पनि गतिविधिहरू प्रभावित भए होलान् ?
हामीले कोरोनाको महामारी सुरु भइसकेपछि नै कार्यतालिका हेरफेर गरेको हो । कोरोना महामारीकै बेला कार्यतालिका बनाइसकेपछि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा त हामीले पनि सोच्नु प¥यो नि । हामीले कोरोना नआउँदै सुरु गरेको कार्यतालिका त होइन । पहिलो कार्यतालिका कोरोना नआउँदै फिक्स गरेको हो । त्यसपछि कोरोना आइसकेपछि हामीले संशोधन गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले पुनर्संरचना पछिको समायोजनको काम त हामीले एक वर्ष अघि सक्नुपर्ने थियो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ अझैं पनि पाँच, सात वटा जिल्लाको समायोजना सकिएको छैन । एक वर्षअघि सक्नुपर्ने काम त अझैं सकिएको छैन भने कसरी समयमै महाधिवेशन हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने । अधिवेशन लम्ब्याउने र हामीलाई थकाउँदै लगेर जाने रणनीतिअनुसार अहिलेको संस्थापन पक्ष हिँडेको छ । यसले नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन नगराउने उद्देश्यका साथ नेतृत्व हिँडिरहेको छ ।
अधिवेशन नगर्न त मिल्दैन होला ?
नेपाली कांग्रेसको विधानतः कार्यकाल चार वर्षको हो । यतिबेला नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । हामीलाई सरकारका कामहरूमा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । त्यसैले हामीले चार वर्ष भित्र नै महाधिवेशन गरौं भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौं । यो कुरा त हामीले २ वर्ष पहिला नै भनेको हो । विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा कांग्रेसको कार्यकाल एक वर्ष थप्न मिल्छ । हामी त्यो नथपौं महाधिवेशन गरौं भनेर त पटकपटक भनेका हौं । एक वर्ष पहिला नै महाधिवेशन भएको भए अहिले कोरोनाको कारण देखाउन पनि पर्ने थिएन । अहिले त एक वर्ष थप गरिए पनि वर्तमान नेतृत्व महाधिवेशन नगराउने षड्यन्त्रमा लाग्दै छ । अहिले त बहाना कोरोना भन्न पाइयो ।
तपाईंहरूको महाधिवेशन फागुनमा नहुने, नेकपाले चैतमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोक्दा तपाईंहरूलाई अलिकति लाज पनि लागेको छ होला ?
हामीले त भनिरहेका छौं । कोरोना भनेको महामारी हो, यसमा हामी सबै सचेत छौं । हामीलाई पनि हजारौं मानिसहरू जम्मा भएर भीडभाड गरेर कार्यकर्तालाई जोखिममा पारौं भन्ने छैन । अधिवेशनको विकल्पमा पनि छलफल गर्न हामी तयार छौं । कोरोना छ भन्दै भन्दै अधिवेशन सारेर विधान लत्याउन मिल्दैन । विधान नै लत्याउने हो भने कांग्रेस केमा टेकेर अघि बढ्ने हामीलाई गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ । भन्न त यहाँ पार्टी सभापतिले पटकपटक संविधानअनुसार हुन्छ भन्नुहुन्छ । त्यो भनेको थप ६ महिना हो । यो कुरालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सामान्यरूपमा लिनु भएको छ । तर कांग्रेसका लागि यो गम्भीर भूल हो ।
अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुनुमा कोरोनालाई दोष दिने की हाम्रो कार्यशैलीलाई ?
हाम्रो भनाइ पनि यही हो । कोरोनाको महामारी बढ्दै छ । यसबाट कसरी छलिएर अघि बढ्ने भन्नेमा सोच्नु पर्छ । तीन चार महिना लकडाउन भयो त्यसले पनि हामीले गतिविधिहरू गर्न सकेनौं होला । अहिले त अवस्था भयावह भए पनि लकडाउन निषेधाज्ञा छैन, जसले गर्दा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । विश्वमा यस्तो महामारीमा पनि चुनावको तयारीहरू भइरहेका छन् । नेपालको सीमा जोडिएको बिहारमा पनि चुनावको मिति घोषणा भएको छ । त्यसका कारण नेपालमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा कोरोनालाई देखाउँदै अधिवेशन नगर्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व अघि बढेको छ ।
आम निर्वाचनभन्दा पार्टीको अधिवेशनमा संख्या कम हुन्छ, त्यसका लागि केही विकल्प हुन्छ ?
विकल्पका विषयमा हामी छलफल गर्न तयार छौं । हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा ३३ लाख भोट ल्याएका थियौं । पार्टी अधिवेशनमा ती ३३ लाखले भोट हाल्ने पनि होइन । नेपाली कांग्रेसको अहिले क्रियाशील सदस्यता संख्या झन्डै पाँच लाखको हाराहारीमा छ । अरू पाँच लाख थपिँदा १० लाख होला । त्यो १० लाख पनि प्रत्येक वडामा विभाजन भएका छन् । प्रत्येक वडाका क्रियाशीलहरूको भेलाले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन हुन्छ । थोरैमा १६ जना चयन हुने हो । बढीमा १२६ जना हो । १२६ जना भनेको सहर बजारका केही सीमित वडामा मात्र हो । क्षेत्री प्रतिनिधिहरूबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र हुँदै आउने भएको हुनाले प्रतिनिधिहरूले नै भोट हाल्ने भएकाले विकल्पहरू सोच्न सकिन्छ ।
तपाईंले विकल्प विकल्प भन्नुभयो, तपाईंले भनेको विकल्प के ?
जस्तो जिल्ला अधिवेशन गर्दा वडास्तरमा भेला भएर त्यहीबाट भोट हालेर काउन्ट गर्ने र त्यो रिजल्ट जिल्लामा पु¥याउने गर्नुपर्छ । त्यस्तो भयो भने जिल्ला अधिवेशनका लागि पनि सबै एकै ठाउँमा भेला हुनुपर्ने अवस्था परेन । यसैगरी क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पनि सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुनु परेन । गाउँपालिकाको अधिवेशन पनि क्रियाशील सदस्यले वडामै भोट हाल्न सक्छन् ।
नेपाली कांग्रेस मास बेस पार्टी हो, नेता तथा दाइको आशीर्वादका लागि पनि भेट्नुपर्ने हुन्छ ?
मास बेस पार्टी हो । यसमा दुई मत छैन । अहिलेको अवस्थामा धेरै भीडभाड भएर अधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले समय परिस्थितिअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । महामारीका कारण जोगिन पनि यस्तो गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ठूलो भीड जम्मा गरेर महामारीलाई नै चुनौती दिनेगरी अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । निश्चित प्रतिनिधिहरू छनोट गरेर र केही विधि विधानहरू पारित गर्ने भएकोले हामीले यसका विकल्पहरू सोच्न सकिन्छ । पहिलाको जस्तो सामान्य अवस्था भएको भए आज यो कुरै आउने थिएन नि । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । समयमा अधिवेशन हुनुपर्छ, अधिवेशनको विकल्प नै छैन ।
सभापतिले गरेका गलत क्रियाकलाप भन्दै तपाईंहरू ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ, हैन ?
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई हामीले पटकपटक भेटेर मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराएका हौं । सभापतिले पछिल्लो समय गरेका कामहरू गलत छन् ती कामहरू सच्याउनुपर्छ भनेर । हालै हामी २७ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा गएर हामीले पत्र दर्ता गरेका छौं । पार्टीका मुख्यसचिवमार्फत सभापति देउवालाई यस विषयमा जानकारी भइसकेको छ । पार्टी नेतृत्वले समायोजनका लागि यत्रो समय बितिसक्दा पनि किन तदारुकता देखाएको छैन । अहिले पनि केही जिल्लाहरूमा समायोजन नै टुंगिएको छैन । अहिले पनि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विधि विधानलाई मिचेर एकलौटी र हचुवाको भरमा वितरण गरिएको छ । रसुुवा जिल्लामा एक जना व्यक्तिको हातमा १२ सय क्रियाशील सदस्यता दिएर पठाइएको छ । डँडेलधुरामा त्यसैगरी ११ सय क्रियाशील सदस्यताको फाराम दिएर पठाइएको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसको विधानले नै नमिल्ने गरी क्रियाशील सदस्यताको फाराम हचुवाको भरमा वितरण गरेको छ ।
क्रियाशील सदस्यता थपिनु भनेको कांग्रेसकै लागि राम्रो होइन र ?
सदस्यता थपिनु राम्रो हो । तर, विधि र प्रक्रिया पनि त मिल्नु पर्‍यो । विधि र विधान पालना गरेर मात्रै सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । हाम्रो भनाइ भनेको विधि र विधान पालना गरेर गरौं, स्वच्छ तरिकाले गरौं भन्ने हो । क्रियाशील सदस्यताको फारम जिल्ला सभापतिले नपाउने, वडा सभापतिले नपाउने अनि एउटा व्यक्तिले लिएर जान पाइँदैन ।
संस्थापन पक्ष विधानसम्मत चल्नुप¥यो भन्ने तपाईंहरूको मूल एजेन्डा हैन ?
हामीले बारम्बार उठाएको विषय यही हो । चाहे भ्रातृ संस्थाहरूको कुरा होस् या समायोजन सबै कुराहरू विधानसम्मत् हुनुपर्छ भन्ने नै हो । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराएर निर्देशिका बनाएका छौं । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि हामीले निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिएका छौं । निर्देशिकाअनुसार काम गर्नुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विधानअनुसार समायोजन हुनुपर्छ । अहिले पनि समायोजनमा अनियमितता गर्न खोजिएको छ ।
तपाइंहरूले १९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिनुभएको छ, योबीचमा तपाईंहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभए के गर्नुहुन्छ ?
हामीले सभापतिलाई बुझाएको पत्रमा कुन कुन ठाउँमा के के समस्या छ त्यो उल्लेख गरेका छौं । हामीले उल्लेख गरेका समस्याहरू समाधान भएनन् भने १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म समाधान नभए वैधानिक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुन्छौं भनेका छौं । विरोधका कार्यक्रमबारे हामीले छलफल गर्दैछौं ।
वैधानिक विरोधको कार्यक्रम भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट तपाईंहरू बाहिरिनुहुन्छ भन्ने हो ?
हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने त भनेका छैनौं । वैधानिक संघर्षका कार्यक्रम भनेको हाम्रा माग सम्बोधन भएन भने हामीले छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने विषय हो ।
सुशील कोइरालाका पालामा गठन भएका विभागहरू त खारेज भएका थिए, अहिले त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले विभाग गठन गर्दा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रहेका शेरबहादुर देउवाले विरोध गरेपछि कोइरालाले दुई वर्षभित्रै गठन गरेका विभागहरू खारेज गर्नुभएको थियो । अहिलेका सभापति शेरबहादुरजीले चार वर्षको कार्यकाल सकिएर महाधिवेशन तोकिसकेपछि विभागहरू गठन गर्नुभयो । यो विधानतः गलत काम हो । अहिले त कांग्रेसलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।
महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हो, यो बीचमा तपाईंहरूले उठाएका माग सम्बोधन भएनन् भने तपाईंहरूले के गर्नुहुन्छ ?
महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हो । १४औं महाधिवेशन विगतको विधिअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । महाधिवेशनलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाएर अघि बढोस् अधिवेशन नै हुनुपर्छ । विशेष महाधिवेशन भन्ने कुराहरू आएका छन् त्यो हुन सक्दैन ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा त १४औं महाधिवेशन पछि पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष लागेको छ तपाईंहरूको योजना के छ ?
उहाँहरूले जतिसुकै पार्टी कब्जा गर्छु भन्ने रणनीति लिए पनि अब सम्भव छैन । कब्जा त्यसै गर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । उहाँहरूले महाधिवेशन प्रभावित गर्नेगरी केही गतिविधिहरू त गर्नुभएको छ तर उहाँहरू यसमा सफल हुनुुहुन्न । जसरी अहिले सभापतिको गृह जिल्लामा पार्टीका कार्यकर्ताको मर्मविपरीत काम गर्नुभएको छ त्यसको जवाफ उहाँलाई त्यहीका जनताले दिन्छन् ।
१४औं महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुन्छ ?
कांग्रेसभित्रको गुट १४औं, १५औं महाधिवेशनबाट सकिएला भन्ने कुरा त कल्पना नगरौं । कुनै पनि जीवन्त पार्टीमा वादविवाद र प्रतिवाद भन्ने कुरा भइनै रहन्छ । विभिन्न विचार समूहहरू हुन्छन् । एउटै मात्र विचार भएको पार्टी त कम्युनिस्ट मात्रै हुन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो स्वाभाविक हो ।
१४औं महाधिवेशनका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने होडबाजी जस्तै छ, त्यो अझ बढी
तपाईहरूको समूहमा छ, को को हुनुहुन्छ सभापतिको उम्मेदवार ?
अहिले नै व्यक्तिका विषयमा किटानी गर्न सकिने अवस्था छैन । स्वच्छ निष्पक्ष भएर अधिवेशन गरियो भने जतिजना सभापतिको उम्मेदवार भए पनि सभापति आखिरमा एक जनाले जित्ने हो । स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन भएर जो व्यक्ति निर्वाचित भए पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।
तपाईंको भूमिका कहानेर हुन्छ ?
म झन्डै १० वर्ष नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसेर काम गरेँ । अब सम्भव भएसम्म त्योभन्दा माथिल्ला पदहरूमा जाने लक्ष्य छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल बाँकी नै छ । केन्द्रतिरै बसेर काम गरेको हुनाले केन्द्रतिर नै हुन्छु । केन्द्रीय कार्यसमितिको सहमहामन्त्रीसम्म मेरो लक्ष्य छ ।
दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय संसदीय दलबाटै गर्नुपर्छ : काँग्रेस सांसद दिव्यमणि
२०७७ कार्तिक ३
बाबुराम बहुलाएका होइनन् भने आरोप प्रमाणित गरेर देखाऊ !
२०७७ कार्तिक २
विचारको राजनीति र नेपाली कांग्रेस
‘बुद्धिको पाइला’ कवितामा बुद्धिविलास